‘भिजन २०’ का नाममा एन आर एन ए मा तिब्र बिवाद र असन्तुष्टि | Sambad Media
‘भिजन २०’ का नाममा एन आर एन ए मा तिब्र बिवाद र असन्तुष्टि
एन आर एन ए युरोप क्षेत्रिय भेला घनिभूत रुपमा चलिरहेकै थियो । एन आर एन ए का केन्द्रिय तहका अभियन्ताहरु हलको अघिल्लो पङ्तिमा थिए । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, प्रमुख संरक्षक जिवा लामिछाने, उपाध्यक्ष कुमार पन्त, केन्द्रिय महासचिव डा बद्रि केसी, प्रवक्ता रन्जु वाग्ले, संरक्षक रामप्रताप थापा, दिल गुरुङ लगायत सबै । अध्यक्ष शेष घलेलाई मञ्चमा बोलाईयो । उनले एन आर ए को भावि योजना सुनाउँदै थिए । उनको छेउमा दाहिनेतिर एक जना युवा थिए, कम्प्युटरबाट चित्रसहितको रिपोर्ट भित्तामा फ्याँक्ने र त्यहि अनुसार शेष घलेले ब्याख्या सुनाउने । तर एउटा महत्वपूर्ण समयमा कम्प्युटरको भित्तो बिजुली चम्किए जस्तो झ्यार झ्यार झ्यार झ्यार देखियो । त्यसमा के लेखिएको छ कसैले हेर्न पाएन । शेष घलेलेपनि यसलाई स्पष्ठसित देखाउनुपर्ने, थप स्पष्ठ पार्नुपर्ने जाँघर देखाएनन् । तर बिजुली चम्किएझैं पर्दा झ्यार झ्यार गर्दा शेष घले सुनाउँदै थिए ‘ एन आर एन ए लाई नयाँ उचाई र सफलतामा पुर्या उन भिजन २०२० को योजना । उनले यति भनेपछि करिब साढे तिनसय सहभागिसम्मिलित हलमा मुख्य नेत्रित्वकाबिच गलफत्ती परिहाल्यो । त्यो भिजन २०२० शेष घलेले तयार गरेपनि त्यसलाई ब्रिहद छलफलमा त ल्याइएन नै बरु हालसम्म त्यसलाई गोप्य राखिएको छ । ‘कफिडेन्सियल’ भनेर उल्लेख गरिएको करिब २१ पेजको त्यो दस्ताबेज गोप्य स्रोतबाट फेला परेको छ ।
भिजन २० जस्तो महत्वाकांक्षी योजना सुनाउने तर ब्याख्या नगर्ने । देखाएको योजनापनि कम्प्युटरको पर्दामा स्पष्ठ नबुझ्ने बरु बिजुली चम्किएझैं घ्यार घ्यार पारेकै भरमा टार्ने देखिएपछि एन आर एन ए का प्रमुख संरक्षक जिवा लामिछाने बसिरहेको ठाउँबाट जुरुक्क उठेर माईक मागे । उनले भने ‘यो भिजन २०२० एन आर एन ए को कुनै बैधानिक निकायबाट अनुमोदित भएको छैन । के छ यसमा ? किन यो बिजुली चम्किएको जस्तो भयो ? यो प्राविधिक कारणले हो की ? यसका बारेमा थप ब्याख्या र स्पष्ठ हुनुपर्योि । यति गम्भिर विषयलाई यति हल्कापूर्वक प्रतुत गर्नु भएन ।’ एन आर एन ए का प्रमुख अभियन्ताहरुलेनै नदेखेको, नपढेको यो दस्ताबेज एन आर एन ए का अन्य देशका अभियन्ताहरुले देख्न पाउने कुरो त संभवै थिएन । यसबारे खास केहि नबुझेका, नसुनेकालेपनि अन्य देशका एन आर एनवालाहरु चुपचाप बसे ।
जब शेष घलेले अमेरिकाको क्षेत्रिय सम्मेलन न्यु जर्सीबाटपनि अनुमोदित भएको भने तब एन आर एन ए का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोपनि चुप लागेनन् । उनले माईक मागे । त्यसपछि शेष घलेको भिजन २०२० को बिरोध गरे । ‘यो भिजन २० भनेको के हो ? के छ यसमा ? यति गम्भिर विषयलाई किन यति हल्का रुपमा प्रस्तुत गरिँदै छ ? यो विषयलाई किन घनिभूत रुपमा छलफलमा ल्याउन सकिन्न ? यो भिजन २०२० का बारेमा न्यु जर्सीमा प्रसंग उठेको हो तर पछि छलफल गरौंला ब्रिस्त्रित रुपमा भनेर टुंग्याएको हो । यस्तो गम्भिर विषयलाई सबै एन आर एन ए का बिच ब्रिस्त्रित छलफलमा ल्याउनुपर्छ, यो गम्भिर विषय हो ।’ उनको जवाफ सुनेपछि शेष घलेले फेरि उहि कुरो दोहोर्या्ए ‘मन परे सहमति गरौं । यहि अवस्थामा एन आर एन लाइ हाँक्न सकिन्न । तर मन पर्दैन भने यसलाई बिर्सिन सकिन्छ । यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन ।’
ददि सापकोटा / फ्र्यांकफोर्ट, जर्मनी